Umkhiqizi nomhlinzeki womkhiqizo wasePlastiki wase China | I-Mestech
Umklamo womkhiqizo wePulasitiki ukuchaza ukuma komkhiqizo nokwakheka kwawo, ubukhulu bawo nokunemba kwawo, ikhwalithi yokubukeka kwayo. Kususelwa kuzidingo zomkhiqizo kanye nezimpawu zento esetshenzisiwe.Ikhwalithi yokuklanywa kwemikhiqizo yepulasitiki inquma ngqo izindleko zayo nezindleko zokukhiqiza
Idizayini yomkhiqizo wePulasitiki ibandakanya izici ezahlukahlukene. Ngokwenza njalo, kuzobhekana nezimo ezahlukahlukene nezakhiwo zesakhiwo. Ulwazi olubandakanyekayo lubandakanya: ukukhetha impahla, ubudlelwano phakathi kwesakhiwo sesikhunta nomkhiqizo, ukukhubazeka kokubukeka okubangelwa ukubunjwa komjovo, ukuxhumana phakathi kwamagobolondo, ukuxhumana phakathi kwamagobolondo nesakhiwo esenzelwe umsebenzi othile, njll.
Inkampani yakwaMestech inikezela ngamakhasimende ukwakheka kwezingxenye zepulasitiki nemjovo yomjovo wemikhiqizo edijithali, izipikha zamandla, ikhaya elihlakaniphile, amalambu okukhanyisa, i-Kitchenware kanye ne-tableware, ukunakekelwa kwezokwelapha, amakhompyutha, imikhiqizo ephathelene nemoto. Lezi zingxenye zinezimo nobukhulu obuhlukahlukene, kufaka phakathi:
(1), izindlu zepulasitiki
(2), Uhlaka Plastic
(3) part okusobala okuyingxenye
(4), okubili impahla udini okuyingxenye
(5), izingxenye plastic Manzi
(6), Gear, igiya worm
(7), Intambo futhi uhola isikulufa
(8), Izacile odongeni izingxenye
(9), Setha izingxenye zikabhiya
(10) parts izingxenye Elastomer
Izingxenye zomjovo ophindwe kabili
Ngemuva kokuthi umdwebo wokuklanywa wezingxenye zepulasitiki usuqediwe ngokuyisisekelo, ukuhlaziywa kwesikhunta nokuqinisekiswa kwebhodi lesandla ngokuvamile kuyadingeka. Hlala uguqula futhi uthuthukise ukwakheka, futhi ekugcineni ufake ekukhiqizeni isikhunta nezingxenye zokukhiqiza.
IMestech inikezela ngamakhasimende ukuklanywa kwezingxenye zepulasitiki, ukwenziwa kwesikhunta kanye nomkhiqizo wokubumba umjovo. Uma udinga ukwazi kabanzi, sicela uxhumane nathi futhi sizokunikeza insizakalo yethu enhle kakhulu.
Langaphambilini Idizayini yokusebenza kwekhaya
Olandelayo: Idizayini yensimbi
Ukucutshungulwa kokuthunyelwe komhlaba kwezingxenye zepulasitiki